Chii chinonzi Pattern Trader - Nezvedu
Nezve Pattern Trader
Chii chinonzi Pattern Trader?
Cryptocurrencies yashandura mamiriro ese emari kubvira Bitcoin payakatanga kuuya muchiitiko muna 2008. Nguva yekutangwa kweBitcoin yainyanya kufadza; iyo cryptocurrency yekutanga yakauya apo nyika yaingodzungunyika kubva pamhedzisiro yedambudziko repasirese remari rakakonzerwa nemitemo yekudzora muUS. Izvo zvakanaka kutaura, hapana akaona macryptocurrencies achiuya.
Vimbiso ye cryptocurrency yaive peer-to-peer fomu yedhijitari yekubhadhara iyo yakasarudzwa, isina kuvimbika, isina muganho, yakajeka, uye inosimbiswa zvachose, asi isingazivikanwe. Icho chaive chivimbiso chakakura, uye pakati penjodzi yezvemari, vashoma chete varimi vanogona kutora njodzi. Vazhinji vavo vaisangova varimi chete, asi 'vatendi' mune iyo crypto hope- iro ramangwana remari- pamwe neiyo yepasi blockchain tekinoroji.
Asi apo Bitcoin payakakwira kubva pamitengo isingasviki $ 1 kusvika kumatunhu akakwirira epasi pazasi pe $ 20 000, munhu wese akacherekedza- hapana aigona kubhadhara kwete. Cryptocurrencies yaive isisiri remangwana remari chete, asi solid digital zvitoro zvekukosha. 'Vatendi' vekutanga vaive vapinda mukana wehupenyu hwese, asi varimi vaive zvino vachitarisa nzvimbo yacho zvine mutsindo. Mamwe akawanda madhijitari anokwanisa kubuda, nevashambadziri vachinyatsotarisa kune inotevera 'Bitcoin'.
Izvo zvaizoratidza kuve isiri-so-smart zano, sezvo mitengo ye cryptocurrency yakadonha. Kupora kwakabudirira kwaizotadza kuenzanisa rally dzakaitika mukati memakore gumi ekutanga e cryptocurrencies. Zvakangodaro, Bitcoin uye mamwe ma cryptocurrensets aizo chengetedza izvo zvagara zvichitsanangura hunhu- kusagadzikana. Mukufungidzira, kusagadzikana ndimambo, nekuti mari inogadzirwa nemutengo shanduko. Uye cryptocurrencies yaizovimbisa kusagadzikana 24/7.
Zvakadaro, kusagadzikana hakusi kutamba kwevana. Ichi ndicho chikonzero ivo vakatanga ve Pattern Trader vakagadzira iyo otomatiki crypto yekutengesa software iyo yaizobvumidza ese marudzi evashambadziri kutora chikamu mune ino inoshamisa mukana, ungave uri mutsva mukudyara kana uine ruzivo. Pattern Trader inozoshandisa akanakisa ezuva ekutengesa nzira vachishandisa matekinoroji epamberi muFinTech kutengesa Bitcoin nemamwe madhijitari mune yakazara otomatiki maitiro. Ichi chikonzero nei Pattern Trader nhengo dzinoita zviuru zvemadhora, zuva mukati, uye zuva kunze. Joinha isu nhasi uye tora chidimbu cheiyo crypto keke.
Kutanga kuita purofiti hombe zuva nezuva neiyo Pattern Trader!
Nezve Chikwata Chedu
Inotungamirwa nechishuwo chekugonesa sevanhu vazhinji sezvinobvira kuti vaite mari kubva pamusika we cryptocurrency, Pattern Trader vakavamba kumisikidza kugadzira otomatiki software yekutengesa yeiyi inonakidza asset kirasi. Nhengo dzekuvamba dzine hwakasiyana hunyanzvi mamiriro, ese ari kubatsira mukugadzira yakanakisa software yekutengesa pasi rose. Chikwata ichi chaisanganisira veteran vatengesi vemari, nyanzvi dzezvehupfumi, masvomhu uye vanogadzira epamusoro.
Mushure mekuvandudza software, pakanga paine chikonzero chekutsvaga vatengesi vebeta vaizobvumidza kuita kwekutengesa kwekutengeserana. Beta testers vakasarudzwa kubva padziva rakapamhamha kuti vasanganise vese novice uye vane ruzivo varimi. Mhedzisiro yacho yainakidza, uye iyo Pattern Trader yakaitwa kuti iwanikwe kuruzhinji kwenguva yakati rebei. Iwe unogona ikozvino kujoina nharaunda yedu nekunhonga kubva kune ruzivo rwevanobudirira kwazvo vatengesi vemari yenguva yedu, zvese mahara!
Joinha iyo Pattern Trader nharaunda izvozvi!